Ishidi le-PP likathayela le-protec floor kanye nokwakhiwa kokuvikela kungenziwa usayizi owenziwe ngezifiso nama-rolls, imvamisa ubukhulu bungu-2-7mm obukhulu, ngokusho kwesicelo esihlukile, singenziwa ukuvikelwa kwe-ultra-violet, anti-static, conductive, ilangabi elisebenzisayo, inkambiso imibala, izivimbela ezonakalisayo zenza ishidi elikhethekile le-pp elingenalutho.
Ishidi elingenalutho le-ESD linesisindo esilula, ukuqina okuqinile, ukufana okufanayo, indawo ebushelelezi, ukumelana nokushisa okuhle, amandla aphezulu emishini, ukuqina kwamakhemikhali okuhle kakhulu nokufakwa kukagesi, izici ezingezona ezinobuthi.
I-Pp lukabhodlela lukabhodlela lukapayipi lishidi elingenalutho ngokuya ngesicelo esehlukile esenziwe ngosayizi ohlukile, isisindo, i-GSM nokuma kwamabhodlela okugcina nokuhambisa, kuhle ngemikhiqizo yamabhodlela ehlukaniswe ngezendlalelo eziningi kuma-pallets, iyiphedi elingcono kakhulu lamabhodlela wokuvikela ukupakisha nokuthumela. Kusetshenziswa kakhulu ekuphekeleni utshwala, ubhiya, iwayini, izimboni zamabhodlela, imikhiqizo yokudla, imikhiqizo yamathini nabanye amabhodlela okupakisha, ukuthunyelwa, izitolo, indawo yokugcina impahla, inport, ukuthekelisa ngokuhlukile ukuvikela imikhiqizo.
I-PP ibhodi elingenalutho luhlobo olusha lwezinto zokuvikela ezemvelo, lapho zisetshenziswa ngeke zikhiqize uthuli, nempilo ende, ingaphezu kwezikhathi ezingama-4-10 impilo yebhodi lukathayela, evuselelwa kabusha, kancane kancane ithathe isikhundla sephepha ibhodi lukathayela, ikakhulukazi eliboniswa emaphaketheni womkhiqizo.